AKHRI+DAAWO SAWIRRADA: Xukuumadda Oo Xubno Metalaya Naafada Somaliland Ka Talo-gelisay Qorshe Dib Loogu Eegayo Xeerka Shaqaallaha Rayidka Ah | Hubaal Media
Guriga CAAFIMAAD AKHRI+DAAWO SAWIRRADA: Xukuumadda Oo Xubno Metalaya Naafada Somaliland Ka Talo-gelisay Qorshe Dib...
AKHRI+DAAWO SAWIRRADA: Xukuumadda Oo Xubno Metalaya Naafada Somaliland Ka Talo-gelisay Qorshe Dib Loogu Eegayo Xeerka Shaqaallaha Rayidka Ah
“Waxaanu rabnaa in aakhirka aynu qabano shirweyne lagu soo ururiyo qoddobo loo gudbiyo golaha wasiirrada, kuwaas oo aakhirka noqon doona xeer wadankan ka hirgalay”
Hargeysa (Hubaal)- Agaasimaha Guud ee Wasaaradda shaqo-galinta iyo Arrimaha bulshada JSL Md. Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase) ayaa shalay xubno kamid ah Naafada Somaliland u furay kulan ku saabsan sidii dib u eegis iyo waxkabadal loogu samayn lahaa xeerka shaqaallaha rayidka ah. Kulankan oo a dhacay hoolka wasaaraddaasi ayaa daba socday qorshe ay Wasaaradda baryahanba ku hawlanayd kaasoo dib loogu eegayo isla markaana kaabis iyo waxkabadal loogu samaynayo xeerka shaqaalaha raydka ah.
Ugu horeyn Afhayeenka dalladda naafada ee Somaliland oo kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyada xeerka shaqaalaha rayidka ah ee xeer no 31 2004 ee lagu samaynayo wax-ka-beddelka iyo kaabista uu u leeyahay naafada Somaliland, waxaana isagoo ka hadlaya uu yidhi; “dadka naafada ah sharci u diidaya xuquuqdooda ma jiro, laakiin waxa taalla caqabado ay tahay in laga hir qaado si ay shaqooyinkooda u helaan. Markaa wasaaraddu way ku mahadsan tahay hawshaasi fiican ee ay soo qabatay, mar hadday bilowday inay xeerarkii ay dib u eegto oo hamigeedu yahay inay dadka naafada ahi sida dadka kale shaqo helaan, way wacan tahay, waxaana ku rajoweynahay mustaqbalka inay iman doonto waqti dadka naafada ahi ay shaqooyin helaan.” Ayuu yidhi Afhayeenka dalladda naafada ee Somaliland
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda shaqo-galinta iyo Arrimaha bulshada JSL Md. Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase) ayaa dhankiisa tilmaamay in loo baahan yahay in wasaaraddu hesho xeer ilaaliya shaqeeyahay iyo loo shaqeeyahay, isla markaasina ay wasaaraddu uga gol leedahay in xeerkan la dajaadejiyo. “shirkani waa kii ugu muhiimsanaa ee naafada lagaga hadlayo, xeerkani muxuu xaqsiinayaa, maxay tahay in qodobo lagu daro. Dawladda Somaliland waxay hore u samaysay barnaamijkii ahaa in wasaaraddaha dawladda, lagu qoro wasaarad walba cid naafo ah la geeyo, khibradiina leh oo shaqayn kara. Kani waxa uu xaq inoo siin doonaa oo ay tahay in shirkadaha ay shaqo idin siiyaan. Waanu ka codsanaynaa shirkaddaha, waxaanu leenahay dadka naafada ahi waa dadkeenii oo shirkad waliba hadday qof ama laba shaqaalaysso, wadanka wax baad tartay, xaq baanu qofkani leeyahay. Xeerarkeenan waxaan leeyay bal idina eego oo talo ku darsada, waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee qodobada muhiimka ah ee aanu is leenahay, xaga dhismaha, xaga shaqada tartankeeda, xaga shuruucda, waxaas oo dhan waa inaynu wax kaga darnaa. Waxaanannu rabnaa xeerarkan aynu dadka kala duwan kasoo qaybgalinay, in aakhirka aynu shirweyn qabano, shirkaas weyna qodobada lagu soo ururiyo loo gudbiyo golaha wasiirrada iyo golaha baarlamaanka, oo uu noqdo xeer wadankan ka hirgalay.” Ayuu yidhi agaasime Maxamed Ilkacase.
Article horeHaamaha Shidaalka – Tusbax Furtay dheh! (Pandora’s Box)
Article soo socdaFarriin La Xidhiidha Muunnaynta Munaasibadda 18-ka MAY Oo Sarreeye Gaas FADAL U Diray Shacbiga Somaliland